‘मेस्सी र रोनाल्डो दुवै बालोन डि’ओर अवार्डका लायक छैनन्’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘मेस्सी र रोनाल्डो दुवै बालोन डि’ओर अवार्डका लायक छैनन्’
काठमाडौं। म्यान्चेस्टर सिटीमा अर्जेन्टिनी स्टार सर्जियो अगुएरोले लियोनेल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डो दुवै बालोन डि’ओर अवार्डको लायक नभएको बताएका छन् । यो सिजनको अवार्ड मेस्सीले जित्ने चर्चा चलिरहेका बेला उनकै देशका यी स्टारले यस्तो बताएका हुन् । यी अर्जेन्टिनी स्टारले फुटबलको यो प्रतिष्ठित अवार्ड जित्ने खेलाडी लिभरपुल वा टोट्टनह्यामको हुनुपर्ने बताएका छन् । लिभरपुल र टोट्टनह्याम यस सिजनको च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा उपाधिका लागि भिड्दैछन् ।
‘मलाई लाग्छ यो अवार्ड जसले जिते पनि च्याम्पियन्स लिगको फाइनलको नतिजाको आधारमा जित्नुपर्छ’ उनले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएको छ । यद्यपि उनले ट्वीटरमार्फत आफूले यसो नभनेको प्रस्टिकरण दिएका छन् । उनले ट्वीटरमा मिडियामा आफूले नभनेको कुरा आएको समेत उल्लेख गरेका छन् । अगुएरो र मेस्सी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा अर्जेन्टिनाका लागि एक दशकदेखि सँगसँगै खेल्दै आएका छन् । उनको मेस्सीसँग व्यक्तिगत रुपमा पनि आत्मीय सम्बन्ध भएकोले उनले यस्तो ट्वीट गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अघिल्लो सिजन पनि मेस्सी र रोनाल्डोमध्ये कुनै एकले यो अवार्ड जित्ने अनुमान गरिएको थियो तर यो अवार्ड रियल मड्रिडका लुका मोड्रिकले जिते । रियल मड्रिडको लागि च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका मोड्रिले क्रोएसियालाई विश्वकपको फाइनलमा पुर्याएका कारण उनलाई यो अवार्ड दिइएको थियो । २००७ पछि मेस्सी र रोनाल्डो मध्ये कसैले पनि यो अवार्ड नजितेको यो पहिलो पटक थियो ।